Articles | Nepal Hypnosis Clinic and Training
मनोसामाजिक समस्या र मनोविमर्श सेवाको आवश्यकता
मानिसको सबैभन्दा शक्तिशाली अंग मन (mind) हो। मनले मानिसलाई काम गर्न प्रेरित गर्छ र उसको आज्ञा मानिसले चाहेर वा नचाहेर मान्नैपर्छ। वास्तवमा मन मानिसको मालिक हो र मनले अह्राएअनुसार गर्नु मानिसको प्रकृति हो। मानिस प्रकृतिविरोधी हुन सक्दैन। मनको कारण नै मानिस छ र उसको अस्तित्व पनि। त्यो मन नै हो जसले मानिसलाई प्रेम, घृणा, सुख, दुःखजस्ता संवेग वा संवेदनाहरूसँग परिचय गराउँछ। मन देखिदैन तर महसुस गरिन्छ र यही आभास नै संसारलाई अड्याउने शक्ति हो ।
~ प्रा. डा. शान्ता निरौला
मानिसको जीवनमा गाँस, बास र कपासजस्तै यौन पनि अत्यावश्यक छ । तसर्थ मानिसमा यौनसम्बन्धी उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो समाजमा वैवाहिक जीवनमा यौनसम्बन्ध स्वीकार्य छ । सामाजिकरूपले मान्यताप्राप्त सुरक्षित यौनसम्बन्धमा सीमित रहनुलाई यौन संयमता भनिन्छ । केही समयअघि यौन शब्दको उच्चारण सभ्य समाजमा अपाच्य हुन्थ्यो । कसैले यौन शब्दको उच्चारण गरेमा ऊ उच्छृङ्खल, उत्ताउलो व्यक्तिमा गनिन्थ्यो र सबैको कड्के नजरको सिकार हुन्थ्यो । तर आजकाल यो समस्या छैन ।
ठूलाठूला कार्यालयका हाकिमहरूमा पनि कुनै गोष्ठीमा भाग लिन जाँदा, परिचय गर्दा सबै क्षमता नभन्ने, बोल्न अकमकाउने, असहज महसुस गर्ने जस्ता समस्या हुनसक्छन् । यी सबै समस्याका कारण आत्मसम्मान न्यून हुनु हो । आफूलाई महत्व नदिने, राम्रोसँग स्याहार नगर्ने, आफूले गरेका कामको महत्व नदेख्ने, प्रतिभा तथा क्षमताको पहिचान गर्न नजान्ने, आफूलाई हरेक समस्याको कारक र जिम्मेवारी ठान्ने र दोष दिने जस्ता व्यवहारहरू न्यून आत्मसम्मानका लक्षणहरू हुन् ।
छोराछोरीको सही मार्गदर्शन कसरी गर्ने?
- अर्चना विभोर (मनोविमर्शकर्ता तथा प्रशिक्षक)
सन्तानको प्रेम र सुरक्षा सबै प्राणीहरू गर्दछन् । मानवजातिले सन्तानलाई विशेष प्रेम गर्दछन् । आफ्ना सन्तानलाई माया गर्ने, तिनको मार्गदर्शन गर्ने अभिभावकहरूको कर्तव्य पनि हो । हरेक अभिभावक आफ्ना सन्तानको रेखदेख, सुरक्षा, मायाममता, भरणपोषण, शिक्षादीक्षाका लागि सक्दो मिहिनेत गर्दछन्। अभिभावकले डोर्याएको बाटोमा 'ताते' गर्दै हरेक बालबालिकाको यात्रा सुरु हुन्छ। मनमस्तिष्क विकाश हुनु भन्दा पहिलेदेखि नै बालबालिकालाई डोर्याउने भएकाले अभिभावकले जस्तो चाह्यो त्यस्तो बाटो हिँडाउन सक्छन् । मानिसले चालेको प्रत्येक पाइलामा अभिभावकको देन हुन्छ । मायाप्रेम, लगाव, समर्पण आदिले भरिपूर्ण मार्गदर्शनका कारण मानिसले सगरमाथाको चुचुरो छुने सम्म साहस गर्दछन् ।
प्रेम गर्ने शैली